Kubvumbi 21 ndeyeGoogle's Mobilegedden! Yako Yekutarisa Yenhare SEO | Martech Zone
Kubvumbi 21 ndeyeGoogle's Mobilegedden! Yako Yekutarisa yeiyo Mobile SEO
Muvhuro, April 13, 2015 Svondo, Kubvumbi 12, 2015 Douglas Karr
Tinotya here? Kwete, kwete chaizvo. Ndiri kutya kuti saiti idzo dzisina kugadziridzwa kuti dzishandiswe nhare dzaive dzatotambura nekushomeka kwevashandisi kubatana uye kuita. Iye zvino Google iri kungobata nekuvandudza maalgorithms ekupa mubairo masayiti akagadzirirwa mushandisi wekufambisa ane masosi akakura mukutsvaga kwefoni.
Kutanga Kubvumbi 21, tichave tichiwedzera mashandisiro edu e mobile-hushamwari sechiratidzo chepamusoro. Shanduko iyi inokanganisa tsvagiridzo yemafoni mumitauro yese pasirese uye ichave nemhedzisiro mukutsvaga kwedu. Nekudaro, vashandisi vanozoona zviri nyore kuwana akakodzera, emhando yepamusoro mitsva yekutsvaga yakagadziridzwa pamidziyo yavo. Google Search Console
Izvi zvinoita zvine musoro kana ukandibvunza… kwete kwazvo ari hope dzakaipa vose iri kupopota nezve muindastiri yeSEO. Ini ndinofunga zvakawanda zvehope zvinonongedzera kuchinetso chakakosha mu indasitiri yekutsvaga - kunyanyisa kutarisisa pamatanho uye kwete kukwana kwakaringana pane mushandisi kubatanidzwa uye shanduko. SEO vanachipangamazano vangadai vakagadzirisa avo vatengi 'saiti kare kare dai vanga vachitarisa kwakakodzera metriki.
Tinokurudzira kushandisa Google's Nhare-Yakanaka Bvunzo uye Webmaster's Mobile Usability Report kugadzirisa matambudziko nekugadzirisa chero nyaya dzakasarudzika nenzvimbo dzako Heino yakakwana infographic kubva Mapfumbamwe Hertz, InstantShift, uye AntiPull.
Tags: April 21kushandira zvine simbagoogle mobile seogoogle seomobile searchmobile seonharembozhamobile viewportnharembozha webhusaitifambisainopindura nzvimboparadzanisa URLviewport
14 Matipi Ekuvandudza Yako Organic Kutsvaga Kuita paGoogle
Apr 13, 2015 pa 10: 11 AM
Ichi chimwewo chakateedzana masosi makuru ekugonesa vakuru vangu kuti tinofanirwa kugadzirisa. Zvakaoma kuisa shanduko kana zvese zvikaonekwa chiratidzo chedhora chekutanga kudyara…
Apr 13, 2015 pa 7: 35 PM
Ini ndinofunga zvese zvinosetsa uye hunyengeri kuGoogle kupusha izvi kana Google services pachavo vari pakati pevatadzi vakaipisisa.
Semuenzaniso zvinhu zvakaita seGoogle mafonti uye analytics zvinozivikanwa nekukonzera kuvharira (kupa) uye nekukurumidza nyaya.
Kunyange ini ndichibvuma nemoyo wese kuti isu tese tinofanirwa kuve nharembozha, isu tinoda maturusi ari nani pane maviri maGoogle masevhisi awakakurudzira.
Google's Mobile Usability tester inopa mhinduro dzakasiyana zvichienderana nekuti inguvai yezuva. Dzimwe nguva iwe unotyisa zvine hushamwari uye dzimwe nguva yako kwete,
Uye Zvishandiso zveGoogle zveWebmaster zvinozivikanwa nekugara zvisina tariro kunze kwechinyakare nemhedzisiro yacho.
Nepo iwe uchikwanisa kuona kuti ndeapi mapeji aakatora semafoni asina hushamwari pamusoro pemwedzi wapfuura, hapana nzira yekugadzirisa uye wozvizivisa kana wagadzirisa nyaya.
Uyezve ini ndakaisa yakarongedzwa dhata markup pane yangu saiti makore apfuura uye ini ndichakamirira WMT kuti itore zvakakwana.
Saka iwe unofanirwa kushamisika, kana Google ichatanga kuranga saiti, ichave iri kuvakira pane dhata rekare kana data razvino?
Google ichange ichipa munhu wese mukana wakaringana kuti azivise kana nyaya idzi dzagadziriswa?
Panguva iyo zvinoita kunge zvisingaite.
Apr 13, 2015 pa 11: 10 PM
Maka, handipokane zvachose. Nekudaro, Google Webmasters chaizvo vakaita basa rakakura pakuvaka yakazara turu yekushandisa kuyedza yako saiti. Ive neshuwa yekunyoresa kune Webmasters, wedzera saiti yako, uye uone mhedzisiro. Ivo vanokubatsira iwe kunetsa nyaya dzese kudzika kune iyo pixel.